Baro Sida Jirka Iyo Timaha Loogu Qurxiyo Malabka - Daryeel Magazine
Baro Sida Jirka Iyo Timaha Loogu Qurxiyo Malabka
Khubaro ku takhasustay qurxinta iyo daryeelka caafimaad ee maqaarka bani aadamka ayaa cilmi baaris ay muddo wadeen ku sheegay in malabka oo lagu dhaashto (marsado) ay qayb wax ku oola ka qaadato quruxda wajiga qofka iyo guud ahaanba maqaarka.
Khubaradan oo ka kala tirsan Jaamacadda Cambridge ee magaalada London iyo Mac’had cilmi baariseed oo isla London ku yaalla ayaa daraasad ay muddo wadeen ayay ku caddeeyeen in is qurxinta xilli qaboobaha oo inta badan maqaarka sare adkaado ama harqo ay tahay xilliga ugu wanaagsan ee looga faa’iidaysan karo qurxinta maqaarka.
Malabku waxa uu jirka ka ilaaliyaa dildilaaca iyo haraqa, waxa uu ka ilaaliyaa qallafka, waxaa uu baabi’iyaa finanka wajiga, waxaa uu u wanaagsanyahay timaha, waxaa maqaarka ka diifaaca waxyeelada deegaanka,. Waa waxa ugu wanaagsan ee la isku qurxin karo, isla markaana ah dabiici aan wax saamayn ah ku yeelanayn jirka.
Sida loo marsado:
1. Soo qaado jab liin dhanaan ah iyo malab
2. Ku shub liin dhanaanta 3-4 dhibcood oo malab ah
3. Wajigaaga mari lindhanaanta si diiran ilaa 5 daqiiqo
4. Markaa dhameysid biyo qandaca ku dhaq wajiga
Islamarkiiba waxa arki doonta isbadal, iyo wajigaaga oo nuuraya. Liindhanaanta waxey baabi’isaa nabraha yaryar malabkana wuxu wajigaga ka ilaaliya qalaylka.
Si aad isaga baabi’iso finanka wajiga tallaabooyinkaa hoos ku xusan raac:
1. Soo qaado malab iyo qorfe (Cinnamon)
2. Isku qas 3 qaado/malqacad oo malab ah iyo 1 qaado oo qorfe budo ah
3. Wajiga mari adigoo u daynaya mudo 10 daqiiqo ah
4. Iska mayr
Malabka iyo qorfaha waxay daaweeyaan xanuunada ku dhaca maqaarka sida finanka wejiga iwm manalahan waa dhibaato ah ama side effects, sababta oo ah waa wax dabiica ah oo aan kimiko ku jirin ama aan laga samaynin.
Sida timaha loogu qurxiyo:
1. Soo qaado olive oil, malab iyo caano garoor (Yougurt)
2. ku shub baaquli olive oil, kadibna geli Microwave-ka ilaa ay qandhac ka noqonayso (MA AHAN KULAYL), ku dar labo qaado oo malab ah iyo 1 qaado oo caano garoor ah iskuna qas.
3. Mari timahaaga oo nadiif ah, bac ku xiro timaha.
4. Hakuu saarnaado mudo ugu yaraan 20 daqiiqo ah, kadibna biyo qandac ah isaga mayr.
Marso asbuucii hal ama labo jeer, Insha Allah mudo hal bil ah ayaad natiijo isaga dareemi doontaa
Waxay kaa joojinayaan timaha daadanaya,way kuu nafaqaynayaan, waxayna timahaaga ka dhigayaan kuwa ifaya wayna kuu dheeraanayaan Insha Allah